Blu-Ray BD DVD CD Video Player Software Free Download | | OS-ụlọ ahịa Blog
November 19, 2017 admin ngwa, Computer, Driver, OSGEAR Support, ngwaahịa, nchekwa 0
Blu-ray Disc (afo BD) bụ otu n'ime ndị na-diski formats mgbe DVD na-echekwa elu-edu video na elu-ike data. Blu-ray Disc bụ a ọzọ-ọgbọ diski nkọwapụta zubere site Blu-ray Disc Association, nke na-emi esịnede Sony na Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., na SONY duru mbara nkwalite nke yiri na ngwaahịa na 2006. Blu-ray discs na-aha ya bụ n'ihi na-agụ akwụkwọ iji a-acha anụnụ anụnụ laser doo na a wavelength of 405 nanometers (a 650 nanometer wavelength red agụ maka DVD na a 780 nanometer wavelength infrared maka CD). Ebe a bụ otu ìgwè nke magburu onwe ọkachamara Blu-ray playback ọkụ software maka onye ọ bụla na-eso.
More atụ aro software nleta n'okpuru ~~~
Nwere ike ikwu Windows
Nwere ike ikwu maka Mac OS
Hot Nye ~ ~ ~
Oghere na Type
Biko jiri na akwado mbụ software
Leawo-eme dị ka free Blu-ray diski player, free DVD diski player, free 4K HD video, free ISO file player, na free audio player. N'ịbụ a free Blu-ray diski player software ngwa, ọ na-ekere Blu-ray discs maka kpam kpam free, na n'ala dakọtara na DVD discs playback, n'agbanyeghị na ha bụ azụmahịa ma ọ bụ mgbe. Ọ bụ ihe kasị mma free software na-egwu Blu-ray on Windows (tinyere Windows Vista, XP, 7, 7, 8, 8.1, na 10).
PowerDVD juru na pụrụ iche nkiri, music and photo features indispensable for creating an unbeatably immersive sight & ụda ahụmahụ. Na ndị mmadụ na-achọ ka ike a sinima obi na-adị n'ebe obibi ha, PowerDVD ugbu a nwere ụwa-nke mbụ technology mkpa jirichaa nwere nke gị 4K na HDR TV!
Standard Versiom - The best Blu-ray player software that supports BD, ISO faịlụ na BDMV nchekwa na pụrụ iche ngwaike osooso - BluFast MX.
Pro Version - Nkwado zuru-apụta Blu-ray menu Eme mbụ audio quality Ò Kwekọrọ n'Ozizi na otutu mgbasa ozi formats
Weta Hollywood n'ụlọ na-eduga video playback, Blu-ray na DVD software, Corel® WinDVD® Pro. Si elu-mkpebi 4K videos na HEVC (H.265 *), na 3D video, DVD na Blu-ray, enwe a nnukwu iche iche nke formats na pụtara quality, Dolby ụda na ndị ọzọ. Kensinammuo njikwa na emelitere, oge a interface ka ị na mfe ezi-na-akụ video na ọdịyo. Plus, enwe smoother playback na ọhụrụ 240 fps arụmọrụ.
Play ọ bụla Blu-ray Disc / nchekwa / ISO oyiyi faịlụ, 4K video na 1080p HD video na elu definition image na magburu onwe video quality.
Blu-ray Toolkit bụ nile na-na-na-Blu-ray software, nke mejupụtara Blu-ray Player, Blu-ray Ripper, na Blu-ray Copy Platinum software. Na nke a dị ike na vasatail Blu-ray Toolkit, ọrụ nwere ike n'ụzọ dị mfe ịnagide ọ bụla Blu-ray nke na-enwe ihe pụrụ iche Blu-ray ahụmahụ.
A ike player na ike igwu Blu-ray diski, Blu-ray folder, DVD diski / nchekwa / ISO faịlụ na nkịtị media faịlụ na videos were were. Ị na-enwe ike igwu egwu ọ bụla Blu-ray diski kpọmkwem 1080p HD visual mmetụta na-egwu H.265 / HEVC ngbanwe 4K video faịlụ losslessly on PC. Ihe bụ ihe ọzọ, a Aiseesoft Blu-ray Player na-eme dị ka a nkịtị media player maka ihe ọ bụla HD / SD video faịlụ na ị na-enwe obi ụtọ immersive audio mmetụta.
Enweta ihe Blu-Ray Nkwado na ngwaahịa ~ pịa ebe a
Gịnị nwere ike na-agụ ma ọ bụ na-egwu Blu-Ray DVD diski?
Olee otú igwu egwu 3D Blu Ray BD Video??
Intel ọkwọ ụgbọala nkwado Technology_Internet 64-bit Windows iwu nkọwa Series Driver Support software HD Graphics processor OS-ụlọ ahịa processors Samsung Ekwentị mkpanaka Nokia CPU Public Nzube ngwaọrụ Model HTC ihe Njikwa Ngwaọrụ Technology
Technology Public Nzube Intel Server processors ihe Njikwa Ngwaọrụ Technology_Internet HTC Sony Ericsson smartphones Qualcomm 64-bit Windows software Nokia Samsung Galaxy CPU HD Graphics Samsung OS-ụlọ ahịa Ekwentị mkpanaka Intel ngwaọrụ Model processor iwu nkọwa Series Driver Support ọkwọ ụgbọala nkwado